Ndingayichaza njani imveliso yam kwi-Amazon ngendlela yokwenza uluhlu lwe-optimization?
Wonke umthengisi ophumelelayo we-ecommerce kufuneka azi indlela yokubeka iimveliso kwi-Amazon. Ngokuqhelekileyo, xa kuziwa ekufumaneni iindawo eziphezulu zokukhangela, yinto kanye xa kusetyenziswe ukulungiswa komxholo. Kwaye le ndawo iphakamileyo yeemarike ayikho enye indawo apha. Ngoko, ngaphantsi ndiza kukubonisa indlela yokubeka iikhompyutheni zakho kwi-Amazon - nje ukukhokela ekukhangekeni kwemveliso ngaphaya kwoluhlu oluhle lwemiveliso. Emva kwakho konke, injongo yethu yokuthengisa ngokugqithiseleyo kukujonga kakuhle ekuthengeni kwamakhasimende, kunene?
Indlela yokubeka iipropati kwi-Amazon kunye nokuLungiswa koLungiselelo lweMveliso
Umyinge wokuqala: Ukubaluleka koPhando lwegama elingundoqo
(e) Ukuqwalasela ukuba yonke into ebhalwe kwiindawo zemakethe ezixhamle kwi-intanethi ingafumaneka kuphela ngokusebenzisa ukhetho lokukhangela lwemveliso, amagama angundoqo agqityiweyo kwibha yokukhangela idlala indima enkulu ekuphumeleleni ngokubanzi kwenkqubo. Yingakho akufanele umangaliswe ukuba ukuphatha uphando olunzulu lwegama eliphambili yinto yokuqala ukuba wenze. Kwaye nantsi indlela yokubeka iimveliso zakho kwi-Amazon kunye nokukhethwa kwegama elingundoqo elifanelekileyo. Ndiyincoma ukuba ube ne-kickstart kunye ne-Google Keyword Planner (nje ukuba ube nomfanekiso opheleleyo womsebenzi kwaye ufumane ukuqonda okuyisiseko kwento), kufuneka ilandelwe uphando olusebenzayo ngokusebenzisa esinye sezi zixhobo ozikhethile (Ndincoma ukuba uzame iScientificSeller, igama elingundoqo, iKeg, MerchantWords, i-AMZ Tracker, okanye i-Scope-yonke into enhle kakhulu eyenza kakuhle kwaye isebenzise ngokufanelekileyo-i-Amazon ibonisa ukulungiswa komsebenzi).
Intsika yesiBini: UkuQinisekiswa kokuQinisekisa ngokuPhezulu kwi-Amazon
Emva kokuba i-keyword yegama eliphambili likulungele, lixesha lokuba usebenzise ngokufanelekileyo ukulungiselela ukulungiselela ukulungiselela. Ngaphambi kokuba uqale, qinisekisa ukuqonda iimfuno ze-Amazon eziphambili zoluhlu olusisigxina, olumiselweyo ngokubhaliweyo lweSihloko somkhiqizo, Amanqaku eBhulophu, Inkcazo yeMveliso, kunye neMifanekiso eXhasayo.
Kunconywa ukuba kugcinwe ngaphantsi kweebali ezingama-200 ubude.
Kufuneka unike ingxelo malunga nemilinganiselo yento.
Ivumela iinombolo zokubhala ngamanani kuphela.
Akufuneki ukuba ufake ubungakanani bento kunye / okanye umbala, ngaphandle kokuba kungengcaciso efanelekileyo okanye kukho iinketho ezininzi ezikhoyo kukhetho lomthengi.
Kufuneka ihlale ihlambulukile kwaye icacile, ibhalwe ngokufutshane ngokukhawuleza.
Zijoliswe ekugqibeleni uluhlu lwempawu eziqhelekileyo zemveliso kunye neenzuzo.
Kumele kube lula ngokukhawuleza ukucacisa ulwazi oluphambili kuphela lobaluleka obalulekileyo.
Ngokwenene uye kwindlela eyongeziweyo yokubhala uluhlu lwemveliso esele ifakiwe kwiindawo zakho zeebhola.
Kufuneka ikhuphe ngokubanzi yonke idatha ebalulekileyo enxulumene nemveliso ngokupheleleyo.
Kuthethwa ukujongana neengxaki eziqhelekileyo zentlungu yomthengi osebenza ngendlela efanelekileyo.
Kufuneka kube yinto ekhethekileyo, ilungele kakuhle, kwaye isityebi ngamagama aphambili ephambili.
Kungenzeka ukuba ibe namandla kunokuba nayiphi na igama elithengisa iimveliso zakho.
Ukubalwa komfanekiso okunconywayo akusekho imifanekiso engama-9 eyayixhasa.
Umxholo obonakalayo wokubonwa komgangatho ophezulu uza kuba ngowona khethwayo.
Ukuthatha iifoto zokusetyenziswa kwemveliso, kunye neendlela zokuphila kunye neepakethi zokupakisha ngokuqinisekileyo kuyisisombululo esiphezulu sokuqhubekisa izikhundla zemveliso yakho kwaye ekugqibeleni uqhube iziphumo zakho zorhwebo ngaphaya kwalo.